ITimoty 5: 1-25
ITimoty 4 ITimoty 5 ITimoty 6
Aza mamely mafy loatra ny anti-panahy, fa anaro toy ny ray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy,
Fa izay efa mpitondratena tokoa ka irery tena dia efa nanantena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro aman-alina.
Fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony.
Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino.
Aza soratana ho isan'ny mpitondratena izay latsaka noho ny enimpolo taona sady efa nanam-bady indray mandeha ihany
ary tsara laza amin'ny asa tsara: raha mamelon-jaza izy, raha nampiantrano vahiny, raha nanasa ny tongotry ny olona masina, raha namonjy ny nozoim-pahoriana, raha nazoto nanaraka ny asa tsara rehetra.
Fa mandava ny mpitondratena tanora; fa raha tsy maharitra ny fifehezan'i Kristy izy, dia ta-hanambady
ka hahazo fahamelohana, satria nandà ny finoany voalohany izy.
Fa ny sasany efa nivily nanaraka an'i Satana.
Raha misy vehivavy mino manana mpitondratena, aoka izy hamelona azy, ary aza avela hahavaky tratra ny fiangonana, mba hamelomany izay efa mpitondratena tokoa.
Aoka ny loholona izay mitondra tsara hatao tokony hahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aona amin'ny teny sy ny fampianarana.
Fa hoy ny Soratra Masina: Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary hianao (Deo. 25. 4). Ary koa: Ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany (Lio. 10. 7).
Aza mandray teny hiampangana loholona, raha tsy misy vavolombelona roa na telo.
Aza malaky mametra-tànana amin'ny olona na iza na iza, ary aza miombona ota amin'ny sasany; tehirizo madio ny tenanao.
Aza misotro rano intsony, fa misotroa divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosaosanao matetika.
Ny fahotan'ny olona sasany miharihary ka mialoha ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa manaraka ato aoriana.